ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 22/08/08
အညာ ချဉ်ပေါင် ကို လွမ်းတယ်
ပြောသာပြောသာရယ်… ရွာမှာတုန်းက.. ဒီလောက်ကြီးတဲ့သဘော .. မမြင်ဖူးဘူး. အညာသား ဆိုတော့လေ…ဆည် နဲ့ ချောင်း ပဲ မြင်ဖူးတာကို .. အလုပ်က ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီး အသက် အန္တရယ်များ တယ် ဆိုပြီး မလုပ်ပဲကြတော့ နေလို့မှမရတာ… ပင်ပန်းသမျှ…ရသမျှ အေးဂျင့်ကို ပေးခဲ့ရတဲ့ မိဘချွေးနည်းစာ လေး ပြန်ရအောင်လုပ်ရတာပဲ။ မလုပ်လဲ အိမ်က ရှာပေးတဲ့ အရင်းအနှီး ဘယ်လိုလုပ် ပြန်ရပါမလဲနော.. အထင်နဲ့ မမြင်တော့ တက်တက် စင်အောင် လွဲတာပဲ.. ကုန်ဈေးနှုန်း ကလည်း ကြီးမှကြီး.. ဆန်ဈေးတွေဆို ခုန်တက်သွားတာ နှစ်ဆတောင်မကဘူ… ဒီရောက်မှ အညာမှာလို ချဉ်ပေါဟင်းစားချင်တာ လည်း ဈေးကြီးလို့မစားနိုင်ဘူး… ကြက်သားနဲ့ကြက်ဥ တော့ မဆိုးဘူး ဈေး ကိုပြောတာ.. စားလို့ကျတော့ မကောင်းပါဘူး…ပြောရဦးမယ် .. အညာက ချဉ်ပေါင်ဟင်းကို လွမ်းတယ်ဗျာ…
သဘောင်္တွေ.. ကားဝက်လျှော့မှာ .. ကားတွေ တစ်စင်းပြီးတစ်စင်း.. ပြင်ကြ.. ပြီးတဲ့အစင်းက ထွက်သွား.. အဲဒီအတိုင်ပဲ… မတူတာက.. သဘောင်္ပြင်ရင်.. အနံ့အသက် လုံးဝမကောင်းဘူး..
သဘောင်္ဆေးနံ့..ဆီချေး (ဂျီး)နံ့.. ဓာတ်ငွေ့နံ့.. စုံလို့ပဲ.. ကျန်းမာရေးနဲ့ လုံးဝ မညီညွတ်ဘူး..
ကိုယ်နီင်ငံမှာ.. ဒီလိုများလုပ်ရင်.. ဟွန်း… သဌေးဖြစ်တာကြာပေါ့… ဒါပေမယ့် .. ဘယ်မှာလည်း အလုပ်… တောင်သူ တွေ တောင် လယ်ယာလေးတွေရှီနေလို့… ပြောကိုမပြောချင်ဘူ..
စင်္ကပူမှာ…အချိန်ပို..ဆိုတာ ဘာလည်းလို့တောင်..မေးရမယ်..သူ့နိုင်ငံသားတွေ အတွက်တော့ ကောင်းမှကောင်း…သူများနိုင်ငံသား..တွေကြတော့…(အလုပ်သမား-အလုပ်ပါမစ်) အချိန်ပို မရှိအောင်..ပဲ..
စိတ်ကူရလို စင်္ကပူကိုလာမယ်ဆိုရင်…အက်စ်ပါ့စ် နဲ့တော့ လာဖြစ်အောင်လာပါ…
အလုပ်ပါမစ်နဲတော့..မလာသင့်တဲ့ စင်္ကပူပါ… နေရတာ..အခန်းတစ်ခန်းကို..၁၈ ယောက်..
အိပ်ရတော့ နှစ်ထပ်စင်အိပ်ယာ.. မနက်မနက်ဆို ..စိတ်ညစ်လွန်းလို့.. အစောကြီးထရတာက တမှောင့်.. ထမင်ဟင်ချက်ခန်းမှာ လူကပြည့်လို့.. ရေချိုးခန်းမှာ တန်းစီလို့.. အလုအယက် လုပ်ရတယ်.. နောက်ကျရင်..ဖယ်ရီ..မမှီတော့ဘူး .. တက်ဆီ ငှားပြီးအလုပ်သွားမှာလား..
စင်္ကပူမှာ .. တန်းစီရတဲ ဒုက္ခကလည်းမသေးဘူး.. ဘာလုပ်လုပ်တန်းစီ… ဘဏ်ငွေထုပ်ချင်ရင်..တန်းစီ.. ဘတ်စ်ကားစီးမယ်ဆိုတန်းစီ.. ဈေးဝယ်မယ်ဆိုတန်းစီ.. မဂွတ်ဘူးး…..
DatE Friday, August 22, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this